I-HiRise Duet, ihlawule i-iPhone yakho kunye ne-Apple Watch ngesitayile | IPhone iindaba
I-HiRise Duet, ihlawulise i-iPhone yakho kunye ne-Apple Watch ngesitayile
Ixesha leholide lisondele kwaye iimveliso zisungula ukwazisa kwazo ngexesha elifanelekileyo ukuze sikwazi ukuhlaziya uluhlu lwethu lwesipho ngaphandle komthungo, kunye nezixhobo eziyilelwe ngokukodwa izixhobo zethu zeApple zilungele ukubhala ileta yethu eya kuSanta Claus okanye kwiiKumkani ezintathu. Ishumi elinambini laseMzantsi belingafuni kuphoswa ngala matheko kwaye lisifundisile nje isiseko sayo esitsha sokutshaja seApple Watch kunye ne-iPhone, ukuguqulwa kwesiseko sayo se-HiRise esiphumeleleyo esizinikeleyo njengakuhlala kulula, kwaye kuyilo olulungileyo lokuhlawulisa ezona zixhobo zethu zimbini ngaphandle kokungqubana nomhombiso wendlu yethu.
Ngeli thuba, ukongeza, awuzukubeka zixhobo, kuba isiseko sibandakanya isixhobo sombane se-iPhone kunye netshaja yamagnetic yeApple Watch, ukongeza ekusigcineleni imali ngokungathengi iintambo ezintsha, Isiseko sifezekisa inkangeleko enonophele ngakumbi enentambo enye edibanisa iplagi yethu. Njengoko ubona kwimifanekiso, iApple Watch ihleli kwisiseko se-HiRise Duet, kumphezulu womgangatho wesikhumba oya kuthi ujongane nobuso obutofotofo bewotshi yethu.. Ekunene phezulu kuya kuphumla i-iPhone. Uyilo olwahlukileyo luvumela iApple Watch ukuba isebenzise "Imo yokuma yasebusuku" ukuyisebenzisa njengewotshi yealam, kodwa ifuna ukuba ukuba usebenzisa umtya "ovaliweyo" kufuneka ukhathalele indlela obeka ngayo izixhobo: kuqala I-Apple Watch kunye ne-iPhone.
Isiseko esitsha se-HiRise Duet esivela kwi-Twelve South siba liqabane elifanelekileyo kwitafile yethu esecaleni kwebhedi, sivumela izixhobo zethu ukuba zihlawuliswe ebusuku kwaye zithathe nendawo encinci. Isiseko sinzima, esenza ukuba kube lula ukususa i-iPhone ngesandla esinye, kunye nokunikezela ngozinzo kwisiseko. Ewe kunjalo, ukongeza kwi-iPhone yakho unokuqhagamshela i-iPad Mini okanye i-9,7-intshi iPad Pro. Iyafumaneka kwiwebhusayithi elishumi elinesibini eMzantsi nge $ 119,99 ngombala omnye, kwaye ngethemba lokuba kungekudala izakufikelela kwezinye iivenkile ezinje ngeAmazon., apho iShumi elinambini laseMzantsi linekhathalogu ebanzi yemveliso. Ngolwazi oluthe kratya kunye nokuthenga ngokuthe ngqo, ungandwendwela esi sixhobo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » I-HiRise Duet, ihlawulise i-iPhone yakho kunye ne-Apple Watch ngesitayile
[NgoLwesihlanu oMnyama] Fumana i-MacX Video Converter Pro yasimahla, esona siguquli sevidiyo sibalaseleyo kwi-macOS
IAmazon Music Unlimited iqala ukwanda kwaye ngoku iyafumaneka e-UK, Germany nase-Austria